Mashiinka Nadiifinta Hawada - Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
Disinfector Hawada La Qaadan Karo
Robotka Hawada Faafiya
Mashiinka Nadiifinta Hawada
Hal -abuurka Farsamada
Shahaadooyinka iyo Warbixinta
Cube Nadiifinta Hawada
Qaboojiyaha Deodorizer & Freshener
FAUCI Mashiinka Nadiifinta Hawada Su'aalaha
Sidee loo adeegsadaa mashiinkan?
Jawaab: Marka hore, sida ku qoran tilmaamaha, marka hore iska jeexi filimkii shaabadaynta ee jeermis -dilaha iyo walxaha shay -sifeynta, dib ugu celi mashiinka si waafaqsan booska loo cayimay, daboolna xidh.
Mashiinka waxaa lagu ridi karaa qol leh meel ku habboon qaabkan, waxaana loo isticmaali karaa si caadi ah kadib marka la daarto.
(Xilliga beddelka shaandhaynta iyo shaandhaynta maaddada mashiinka waa nus sano ka dib furitaanka, iyo walxaha kale ee shaandhaynta waa in lagu beddelaa si waafaqsan heerka nadaafadda sida tilmaamaha lagu sheegay)
Sidee bay mashiinkan jeermis -dilista u nadiifisaa oo u nadiifisaa?
Jawaab: Mashiinkani wuxuu adeegsadaa maaddada jeermiska ka samaysan si uu si firfircoon ugu sii daayo nadiifinta gaas-nuujinta iyo is-daahirinta, wuxuuna si siman u fidiyaa oo daboola dhammaan geesaha hawada gudaha iyada oo loo marayo dabaysha wareegeysa ee mashiinka. Waxay dhexda ka qabataa oo dishaa bakteeriyada ama fayrusyada laga yaabo inay hawada ka soo muuqdaan wakhti kasta, waxayna si degdeg ah u burburiyaan. Wuxuu kaloo baabi'iyaa VOC -yada gaasaska waxyeellada leh ee hawada ku jira.
Waa maxay saamaynta bakteeriyada la sii daayay? Fadlan sii faahfaahi.
Jawaab: Arrinta bakteeriyadu waxay inta badan ka kooban tahay laba walxood-saabuun koloriin gaas saafi ah iyo ROS (noocyada oksijiinta firfircoon).
Chlorine dioxide waa jiil cusub oo caalamku aqoonsan yahay oo leh hufnaan sare iyo jeermis dilaa ah. Dadku badiyaa waxay isticmaalaan dareeraha koloriin kaarboon laba -biyood. Hufnaanta jeermis-diliddu waa 2.6-10 jeer tan jeermis-dilayaasha caadiga ah sida 75% aalkolada, koloriin, iyo aashitada hypochlorous. Koloriin gaas kiimiko ah oo saafi ah ayaa si siman loogu qaybin karaa hawada gobolka moodeelka nano-scale, sidaa darteed waxay leedahay 50-100 jeer oo ka saraysa jeermiska jeermiska;
Noocyada oksijiinta firfircoon ee ROS waxaa loola jeedaa walxaha oksijiinta ee firfircoon sida xagasha xorta ah ee hydroxyl iyo radicals free peroxy, kuwaas oo la jaanqaada walxaha ugu waaweyn ee dila bakteeriyada jirka bini'aadamka, waxaana ka dhasha kala -tagga iyo kala -soocidda biyaha. Waxtarka jeermis -diidka ee walxahaas oksijiinta ee firfircoon waxay ka sarreeyaan kuwa koloriin -hawo -mareen ah oo gaas ah. Xitaa kan ugu adag in la dilo nooca bakteeriyada ah endospores -ka jira Dhulka, ROS isla markiiba wuu baabi'in karaa. (Ogsajiinta firfircoon ee ROS wuxuu leeyahay hawsha sare iyo cimri gaaban
ROS oksijiin firfircoon iyo koloriin dioxide ayaa wada shaqeeya si dhakhso ah u burbura oo u baabi'iya gaasaska kala duwan ee waxyeellada leh VOCs.
Waa maxay mabda'a isir bakteeriyada ee sheygan si loo dilo bakteeriyada, caaryada iyo fayrasyada?
Jawaab: Darbiyada unugga, xuubka unugyada iyo jirka borotiinka ee bakteeriyada ama caaryada, waxaa lagu burburin doonaa burburka oksaydhka ee koloriin dioxide iyo ROS. Fayrasyadu waa nooleyaal aan unug lahayn oo aan lahayn derbiyo unug, sidaa darteed si fudud ayay u burburi karaan oo u burburin karaan burburka oksaydhka.
Sidaa darteed, iyada oo aan loo eegin nooca bakteeriyada, caaryada, ama fayrasyada, ha ahaadaan kuwo iska -caabiya ama is -beddela, ma jiro farqi muhiim u ah saamaynta kala -daadinta oksaydhka iyaga oo ay fuliyaan koloriin dioxide iyo ROS.
Gaar ahaan, mashiinkan jeermiska dilayaa ma dili karaa COVID-19 iyo noocyada kala duwan?
Jawaab: Dalal badan ayaa si rasmi ah u sheegay in koloriin koloriin ay dili karto COVID-19 iyo noocyadeeda.
Sababtoo ah wakaaladaha imtixaanku ma bixiyaan adeegyada tijaabinta heerka jeermiska COVID-19 waqtigaan, hadda ma jiro warbixin tijaabin wax soo saar oo toos ah.
Si kastaba ha noqotee, 4 -tii Febraayo, 2020, Guddiga Caafimaadka Qaranka ee Shiinaha ayaa soo saaray “Ogeysiiska Liiska Degdegga ah ee Qaar ka mid ah Daawooyinka Jeermiska ah inta lagu guda jiro Ka -hortagga iyo Xakameynta Cudurka Cusub ee Cudurka Sambabka ee Coronavirus”, jeermiska koloriin kaarboon ayaa lagu qorey alaab degdeg ah oo la isticmaalo ; 2020-kii Febraayo 19, Guddiga Caafimaadka Qaranka ee Shiinaha ayaa soo saaray "Tilmaamaha Isticmaalka Daawooyinka Jeermiska" si ay uga jawaabaan cudurka faafa, kaas oo liis gareynaya jeermis-dileyaal kala duwan oo loo isticmaalo in lagu dilo COVID-19. Liiskan, jeermis -dilaha koloriin ayaa lagu sheegay inuu ku habboon yahay jeermiska hawada.
Iyada oo loo marayo bayaankan rasmiga ah ee kor ku xusan, waxay si dadban u caddaynaysaa waxtarka badeecadan ee dilka COVID-19, isla mar ahaantaana, ROS waxay leedahay hufnaan jeermis oo sareysa.
Xaqiiqdii, awoodda COVID-19 waxay ku jirtaa shaqadeeda qarinta ka dib markay gasho jirka bini-aadamka, asal ahaan maahan mid awooddaas iska leh. Degaanka dibedda, COVID-19 dhab ahaantii aad bay ugu nugul tahay koloriin kaarboon laba ogsajiin firfircoon. Dhibaatadu waxay tahay marka ay gasho jidhka bini'aadamka, way adag tahay in la dilo oo si badbaado leh looga takhaluso farsamada caafimaadka ee hadda jirta.
Marka la barbardhigo badeecadaha la midka ah ee ku tartamaya suuqa, waa maxay kala duwanaanshaha iyo faa'iidooyinka?
Jawaab: Waqtigan xaadirka ah mid ka mid ah noocyada ugu waaweyn ee badeecada la midka ah ee suuqa ayaa ah hawo -nadiifiye, kaas oo hawada gudaha ku soo jiida mishiinka si loo xayeysiiyo iyo jeermis -dilis, ka dibna hawo nadiif ah dib ugu soo celisa qolka. Habkani ma gaadhi karo dilalka waqtiga-dhabta ah ee fayrasyada iyo bakteeriyada hawada ee ka soo muuqda qolka wakhti kasta ka hor inta aanu jidhka bani-aadmigu neefsan, mana horjoogsan karo gudbinta dadka iyo aerosol-ka ee cudurrada waqtiga dhabta ah;
Nooc kale waa buufiye jeermis -dile, kaas oo ku buufiya hawada hypochlorous acid ama chlorine dioxide hawada aerosol si uu u dilo fayraska iyo bakteeriyada hawada ku jirta, iyo sababta oo ah hypochlorous acid si dadban u soo saarta koloriin iyo dioxide. Isku -uruurinta maxaliga ah ee ceeryaanta xalka koloriinku aad ayay u sarraysaa, taas oo dhibaato u geysan doonta jidhka aadanaha. Kiimikooyinkan diirran ayaa ka mamnuuc ah in la isticmaalo iyadoo ay dadku joogaan, jeermis -dilaha ceeryaanta ayaa aad uga fog in si siman hawada loogu qaybiyo. Waxtarka jeermis -dilaha ayaa aad u hooseeya;
Qalabka FAUCI AAPG ee ku dhex jira Mashiinka Nadiifinta Hawada ee FAUCI ayaa si tartiib ah u sii deynaya molecules koloriin dioxide gaas nadiif ah oo hufan iyo ion oksijiinta firfircoon ee ROS. Dhinaca kale, waxay si firfircoon u dhexgashaa oo u dishaa jeermiska si toos ah hawada, taas oo laga hortagi karo lana xakamayn karo waqtiga dhabta ah. Dhinaca kale, kaliya fiirsiga nabdoon oo aad u hooseeya ayaa samayn kara saamayn nadiifin iyo hufnaan wax ku ool ah, wax dhibaato ahna uma geysan doonto dadka ku jira isla qol.
Mashiinkan jeermiska dilayaa ma ammaan baa in la isticmaalo?
Jawaab: Heerka raad-raac ROS ee oksijiinta firfircoon ee laga soo saaray dusha alaabta lagu dhisay FAUCI AAPG ee badeecadani waxay la mid tahay walaxda ugu muhiimsan oo aan kala maarmi karin jidhka bini'aadamka oo disha fayrasyada iyo bakteeriyada. Sidoo kale waa walax dabiici ah waxayna ku jirtaa xadka raadraaca. Waa mid waxtar leh oo aan waxyeello u lahayn jirka aadanaha.
Marka laga hadlayo ClO2, ma laha saddex halis (kansar, teratogenic, mutagenic) waana heer nabdoon oo jeermis-dile. Daawada jeermiska dila ee Chlorine dioxide ayaa la xaqiijiyay tijaabooyin cilmiyeysan oo muddo dheer ah iyo mudaaharaadyo soo noqnoqda, waxaana loo aqoonsaday inay ku habboon tahay in loo isticmaalo caafimaadka iyo caafimaadka, jeermiska cuntada, ilaalinta jeermiska, daaweynta biyaha la cabbo, iwm. Maamulka Dawooyinka GB5749 iyo GB2760, waxaa loo isticmaali karaa jeermis -dilaha biyaha la cabbo iyo cuntada lagu daro. WHO oo la xiriirta bay'ada shaqada iyo heerarka qaranka ee dalal kala duwan, xadka sare ee fiirinta la oggol yahay ee ClO2 ee jawiga shaqada ee soo noqnoqda iyo muddada fog waa 0.3mg/m³, iyo sii-deynta sii-deynta alaabtayada ayaa si buuxda loo dammaanad qaaday inay ahaato ka hooseeya heerkan;
Isla mar ahaantaana, qalabka FAUCI AAPG ee mashiinka jeermiska dila ayaa ka gudbay tijaabada CMA/CNAS ee habboon: gabagabada tijaabada sunta neefsashada ee ba'an ayaa la muujiyey inay tahay mid aan sun ahayn; gunaanadka tijaabada micronucleus -ka unuggu dhammaantood waa taban yahay, taas oo macnaheedu yahay inaysan jirin isku -beddelidda unugyada unugyada iyo sumowga hidda -socodka;
Agabyada bakteeriyada ee la dhisay (maaddada FAUCI AAPG) iyo badeecadaha la xiriira ee badeecadan ayaa si aad ah looga adeegsaday Shiinaha iyo qaar ka mid ah waddamada kale ilaa dhammaadkii 2019 ka-hortagga iyo xakameynta faafitaanka COVID-19, mana jirin falcelin xun oo la sameeyay. ilaa hadda la helay.
Waa maxay tijaabinta iyo shahaadaynta mashiinkan jeermis -dilista hadda?
Jawaab: Mashiinnadayadu waxay dhaafeen kormeerkii khuseeyey ee hay'adda shahaadaynta ee diiwaangashan ee shabakadda caalamiga ah ee CNAS, waxayna heshay shahaadada CE-ROHS ee EU, shahaadada FDA, shahaadada MSDS, Warbixinnada Tijaabada Sunta ee Neefsashada, Warbixinta Tijaabada Fayraska H1N1, Staphylococcus Albus Report Test, Human Enterovirus 71 Warbixinta Tijaabada, Warbixinta Tijaabada Escherichia Coli.
Waa maxay taxaddarrada isticmaalka mashiinka jeermiska?
Jawaab: hereWaxa ku jira baakada jeermiska jeermis -dile, wax aan la dhaqi karin;
Should Waa inaan lagu dhex darin jeermis -dileyaal kale oo alkaline ah ama walxo dabiici ah;
Must Waa inay ka fogaataa wax ka badan 1 mitir walxaha birta ah iyo dharka;
④ Marka bacda la shaabadeeyey ee ay ku jirto maaddada jeermis -dilaha aan la furin, bacdu waxay leedahay uruurin sare oo agabka ah. Kadib markaad furto bacda oo aad soo saarto badeecada, hawo geli 1 ilaa 5 daqiiqo. Ka dib marka urta la yareeyo, waxaa loo isticmaali karaa si caadi ah.
Haddii mashiinka jeermiska dila si joogto ah ugu shaqeeyo gudaha, ma loo baahan yahay maaskaro?
Jawaab: Wali waa lama huraan in maaskaro lagu xidho jawi khatar sare leh marka mid laga yaabo inuu xiriir dhow la yeesho sidayaal suurtogal ah oo ah COVID-19.
Sababtoo ah xaaladaha hawo -mareenka, waxyaabaha bakteeriyada gaaska leh ee ay soo saartay badeecaddu ma dabooli karto afka, sanka iyo aagga indhaha, gaar ahaan marka dhibcaha fayrasku ku dhuftaan meel u dhow ama xawaare sare (sida hindhisada), markaa adeegsiga caqabad jireed ee maaskaro ayaa loo baahan yahay, sidaa darteed badeecada iyo maaskarada ayaa sida ugu fiican loo adeegsadaa wadajirka.
Su’aalo kale oo cusub
Jawaab: Arrintan ku saabsan, waxaan la xaqiijin doonaa shaqaalaha waaxda ay khuseyso ee shirkadeena oo aan kuugu jawaabo kadib.
Warbaahinta Rasmiga ah